Proverbe Ambarivatry : antitra vao mikorinteana. [Cousins 1885 #121]
Proverbe Amboalahy antitra : matoa mivanika, hanaikitra. [Veyrières 1913 #798, Rinara 1974 #164, Cousins 1885 #134]
Proverbe Ampemby : antitra vao mitsiky vazana. [Veyrières 1913 #1799, Cousins 1885 #150]
Proverbe Antitra manara am--pandriana: mivoady ny masoandro hiseho. [Veyrières 1913 #1803, Cousins 1885 #247]
Proverbe Aza manao toy ny voavahy : tanora, manani-kazo ; antitra, vao mikorintsana. [Veyrières 1913 #1807, Cousins 1885 #528]
Proverbe Katsaka lavi-tanàna : raha antitra lanin' ny goaika. [Rinara 1974 #1606, Cousins 1885 #1235, Veyrières 1913]
Proverbe Ketsa va aho ka ho antitra iray taona? [Houlder 1895 #820, Cousins 1885 #1260]
Proverbe Lahy antitra mampirafy : homan-droa trano vao ranga sofina. [Cousins 1885 #1292, Rinara 1974]
Proverbe Ny ditra maha-kely antitra. [Veyrières 1913 #6373, Cousins 1885]
Proverbe Ratsy miafara toy ny fanoto : antitra vao kely anarana. [Veyrières 1913 #1852, Cousins 1885 #2768]
Proverbe Sifotra antitra, ka tsy mahangeza renivorona. [Cousins 1885 #2886]
Proverbe Tanalahy manani-bero : antitra mijaiko, tanora mijaiko. [Veyrières 1913 #1711, Cousins 1885 #2993]
Proverbe Toy ny fanoto: antitra vao kely anarana. [Houlder 1895 #1942, Cousins 1885 #3191]
Proverbe Tsy avelan’ ny ela tsy ho antitra. [Houlder 1895 #1938, Cousins 1885 #3340]